Danjiraha UK u fadhiya UN oo si kulul u eedeeyey milateriga Kenya ee jooga Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Danjiraha UK u fadhiya UN oo si kulul u eedeeyey milateriga Kenya ee jooga Somalia
Mareeg.com: Dowladda Ingiriiska ayaa si kulul ugu dhaleeceysay ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya iney qey ka yihiin ka ganacsiga dhuxusha sharcidarrada ah ee Sooomaaliya laga dhoosfiyo.
Safiirka dowlada Ingiriiska ee Qaramada Midoobay, Mark Lyall Grant ayaa sheegay in ciidamada dowlada Kenya ay ku lug leeyihiin ganacsiga sharci darada dhuxusha Soomaaliya.
Danjiraha oo saxaafada kula hadlayay magaalada New York ee dalka Mareykanaka ayaa sheegay in ciidamada dowlada Kenya iyo qeybo kale ay ku lug leeyihiin ka ganacsiga dhuxusha oo laga dhoofiyo dekada magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Eedeynta dowlada Kenya ciidamadeeda ee ku aadan ku lug lahaanshaha dhuxul laga dhoofiyo dekada Kismaayo ayaa kusoo beegantay wax yar ka dib markii golaha amaanka ee QM ay soo saareen qaraar lagu baarayo maraakiibta timaada dalka Soomaaliya.
Qaraarkaasi waxaa ka aamusay dowlaha Ruushka iyo Jordan, waxaana u codeeyay 13 dal oo ay kamid ahaayeen Nigeria, Rwanda iyo Chad oo ah seddexda dowladood ee Africa kaga jirta golaha amaanka.
Go’aankan ayaa la sheegay inuu yahay mid lagu horjoogsanayo dhaqaalaha Al-shabaab kasoo gali jiray dhoofinta dhuxusha Somalia, taasoo ay goluhu ku tilmaameen inay dhabar-jab ku noqonayso dagaallada ay Al-shabaab ka waddo dalka.
Ciidanka Kenya ee qaybta ka ah AMISOM ayaa ka howlgala gobollada Koonfurta Somalia sida Jubbooyinka, iyadoo dhowr jeer oo hore ay Qaramada Midoobay ku eedeysay inay qayb ka yihiin dhoofinta dhuxusha.
Xildhibaan ku cusub baarlamanka oo ka badbaaday iskuday dil
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo booqanaya Soomaaliya